नेपालका लेप्चा जातिको विवाह तथा मृत्यु संस्कार
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार लेप्चा जातिको जनसंख्या महिला १ हजार ६ सय ९६ र पुरुष १ हजार ७ सय ४९ जना गरी जम्मा ३ हजार ४ सय ४५ जना रहेका छन् । २०४८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिला १ हजार ९ सय ४ जना र पुरुष २ हजार ९ सय २२ जना गरी जम्मा ४ हजार ८ सय २६ जना थियो । त्यस्तै २०५८ साल राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ३ हजार ६ सय ६० जना उल्लेख थियो । यसरी हेर्दा लेप्चा जातिको जनसंख्या १० वर्षमा २ सय १५ जना जनसंख्या बढेकोे देखिन्छ । यसरी हेर्दा दश–दश वर्षसम्म पनि २ सय १५ जना मात्र बढ्नु खासै राम्रो देखिन्न ।
लेप्चा जाति तेह्रो चौधौ शताव्दीतिर नेपालको पूर्वी क्षेत्रतिर लेप्चा जातिको बसोबास थियो भन्ने भनाइहरु पाइन्छ । खै के कारणले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट भारतको सिक्किमतिर बसोबास गर्न सरेको पनि भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ । लेप्चा जातिको मूल बसोबासको रुप कचनजंघा हिमालको आसपासको क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यहीबाट भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, काल्मिपोङ र इलामतिर बसोबास गर्न बसाइ सरेको हुन भन्ने गरेको देखिन्छ । भारतमा लेप्चा जातिलाई लाप्चा भन्ने गर्दछ । नेपालको इलाम जिल्लामा मात्र बसोबास गरेको भेटिने लेप्चा जाति अरु जिल्लातिर बसोबास गरेको तथ्याङकहरुले देखाउँदैन ।
सायद लेप्चा जातिमा मात्र होला विवाह गर्ने चलन अनुसार दाजुको मृत्यु हुन गएमा देवरले भाउजुलाई श्रीमतीको रुपमा स्वीकार्नु पर्ने । अनि श्रीमती मरेमा साली बिहे गर्ने चलन । अरु केही जातिहरुमा भाउजूलाई देवरले स्वीकार गर्ने मात्र चलन रहेको देखिन्थ्यो । वर्तमान समयमा आएर यो चलनलाई पनि छाड्दै लगेका छन् । लेप्चा जातिमा विशेष त मागी विवाहलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यतिको लामो विवाह संस्कार त अरु जातिमा भेटिन्न । केटी मागेको डेढदेखि तीन वर्षमा मात्र विवाह सकिने चलन लेप्चा जातिमा त्यति अवधिभर केटा केटी कै घरमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
लेप्चा जातिमा बिहे गर्दा अन्य जातिको जस्तो एक पटक जन्ती गएर बेहुली लिएर घरमा भित्र्याए जस्तो हँुदैन । लेप्चा जातिमा कन्या छोरीको बिहे सात पटकसम्म गरेर मात्रै सकिन्छ । यी जातिमा जन्ती जाने पनि बडो अच्चमको छ । अरु जातिको जन्ती जाँदा केटा पक्षको तर्फबाट जाने चलन हुन्छ । तर लेप्चा जातिमा केटाको घरबाट जन्ती नगइ केटी पक्षबाट जाने चलन रहेको छ । जन्ती जाँदा पनि बेहुलीसहित बाह्र जना भन्दा बढी जान पाइदैन । अहिले पनि बाह्र जना भन्दा बढी जन्ती नजाने लेप्चा जातिको मौलिक चलनलाई कायम राखेको देखिन्छ । उनीहरु समान थर गोत्रामा बिहे गर्दैनन् । लेप्चा भाषामा बिहेलाई ‘ब्रि’ भन्ने गर्दछ । ‘ब्रि’ को अर्थ हुन्छ दुई प्राणीलाई एउटै बनाउनु । उनीहरुको भाषामा बेहुलालाई म्येक र बेहुलीलाई न्योम भन्दछ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिहरुको मृत्यु संस्कार पनि जाति अनुसारको फरक–फरक रहेको पाइन्छ । मृत्यु संस्कारमा अनौठो जातिमा पर्ने लेप्चा जाति पनि एक हो । धेरै जसो जातिको घरमा मान्छेको मृत्यु हुँदा घरभित्र भएका सिधै ढोकाबाट नै निकाल्ने चलन रहेको पाइन्छ । तर लेप्चा जातिमा मान्छे मरि गयो भने मरेको लासलाई कहिल्यै पनि घरको ढोकाबाट निकाल्दैनन् । घरको कुनै दिशातिरको भित्ता फोरेर लासलाई घर बाहिर निकालिन्छ । लेप्चा जातिमा लासलाई जलाउने वा गाड्ने दुबै चलन रहेको छ । यदि लासलाई गाड्नु पर्ने भयो भने उच्चो पाखामा लगेर गाड्ने गर्दछ ।
१. लेखक रामप्रकाश समथिङ, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय फिदिम, पाँचथर र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् पाँचथरद्धारा प्रकाशित– पाँचथरका आदिबासी जनजातिहरु जेष्ठ–२०६६
३. लेखकद्धय ताम्ला उक्याव र श्याम अधिकारी, श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) स्थानीय विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति काठमाडादवरा प्रकाशित नेपालका जनजातिहरु बैशाख–२०५७
६. लेखक डा. हर्क गुरुङद्धारा लिखित नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघद्धारा प्रकाशित–जनजाति सेरोफेरो मे—२००६
(अर्को अंकमा नेपालका मेचे जातिको बारेमा लेख प्रकाशन गरिने छ ।)